Bogga ugu weyn Faallooyinka Caymiska Xayawaanka ASPCA 2021: Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka | Xalaal iyo Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Sawir laga soo qaaday pixabay.com
Waa maxay Caymiska Xayawaanka ASPCA?
Maxaan U Adeegsanayaa Caymiska Xayawaanka ASPCA?
Sidee buu u shaqeeyaa Caymiska ASPCA?
Muxuu Daboolayaa Caymiska Xayawaanka ASPCA?
ASPCA Caymiska Xayawaanku ma Xalaal buu yahay mise waa Fadeexad?
Waa imisa Qiimaha Caymiska Xayawaanka ASPCA?
Maxay yihiin Qorshayaasha laga heli karo Caymiska Xayawaanka ASPCA?
Faa'iidooyinka iyo Qasaaraha Caymiska Xayawaanka ASPCA
Bisadahaaga, eeyahaaga ama xayawaan kasta oo kale ma u dhinteen xanuun ama shil awgiis waxa kaliya oo ay tahay inaad samayso waa inaad aastaa iyadoon wax magdhow ah la siin?
Ma waxaad tahay mulkiilaha xayawaanka oo wax ka iibsanaya shirkad caymis oo leh qorshayaal hooseeya iyo xulashooyin kala duwan?
Miyaad ka mid tahay kuwa doonaya in ay bishiiba dhawr doolar ku bixiyaan ilaalinta aasaasiga ah ee xaaladda degdegga ah ee xoolaha?
Haddii mid ka mid ah kuwan oo kale ay kula mid yihiin markaa ASPCA ayaa laga yaabaa inay adiga kugu habboon tahay, qorshaha ASPCAs wuxuu bixiyaa dheelitir u gaar ah xulashooyinka faa'iidooyinka oo buuxa oo leh xaddidaadyo siyaasad hoose oo ka dhigaya kuwo la awoodi karo, siyaasadahaani waxay ugu fiican yihiin milkiilayaasha xayawaanka ee aan u baahnayn caymis badan kana taxaddar inaadan bixin adeegyada aysan isticmaali doonin.
Dib -u -eegista Caymiska Xayawaanka ASPCA ayaa loo dhigay si ay kuu siiso macluumaad muhiim ah oo ku saabsan shirkadda.
Bulshada Mareykanka ee Ka -hortagga Xad -gudubka Xoolaha (ASPCA) waa shirkad caymis xayawaan oo bixisa caymiska eeyaha, bisadaha, iyo xayawaannada kale ee xayawaanka ah. Caymiskiisu wuxuu daboolayaa jirro iyo shil labadaba.
Siyaasadaha ASPCA waxaa qorey Shirkadda Caymiska Dabka ee Mareykanka oo leh A+ qiimeynta xoogga maaliyadeed ee AM Best. ASPCA waa adeeg ku hoos jira heshiiska ruqsad siinta Crum iyo Forster (C&P) Pet Insurance Group maadaama aysan ahayn shirkad caymis kaligeed.
ASPCA oo la aasaasay 1866 si kor loogu qaado ladnaanta xoolaha, ASPCA waxay markii dambe heshiis iskaashi la gashay Hartville Pet Insurance Group 2006, si ay u bilawdo iibinta siyaasadaha iyada oo loo marayo heshiiskooda tan iyo markaasna, ASPCA waxay caymisay in ka badan 40,000 Bisadood iyo Eeyo waxayna ka shaqaysay 1.6 milyan oo sheegasho.
Waxay ku shaqaysaa shil iyo jirro iyo siyaasad shil-kaliya, fuushan fayoobi oo deeqsi ah, iyo siyaasad xaaladeed oo dabacsan oo dabacsan taas oo gacan ka geysatay horumarinta hawsha shirkadda si loo hagaajiyo tayada nolosha ee xayawaanka guriga iyo milkiilayaasha.
Akhri ALSO: Shirkadaha Caymiska Xayawaanka ee ugu Fiican Kanada | Cusboonaysiinta 2021
Haddii aad tahay mulkiile xayawaan ah oo aan u baahnayn caymis badan oo aan rabin inuu bixiyo adeegyada aadan isticmaali doonin, ASPCA ayaa laga yaabaa inay kugu habboon tahay. Qorshayaashoodu waxay bixiyaan dheelitirnaan gaar ah oo ah ikhtiyaarrada faa'iidooyinka oo buuxa oo leh xaddidaad siyaasadeed oo hooseysa oo ka dhigaysa mid qiimo jaban leh.
ASPCA waxay dabooshaa kharashka dawooyinka dhakhtarku qoro shilkeeda iyo jirrada iyo siyaasadaha shilka-kaliya haddii loo isticmaalo in lagu daweeyo xaaladaha la daboolay. Tani waxay sidoo kale jaraysaa rijeetada cuntada xayawaanka laakiin ma aha marka loo isticmaalo dayactirka guud ama maaraynta miisaanka. Adigoo ah milkiilaha xayawaanka, ASPCA waxay ku siinaysaa awood aad ku doorato boqolleydaada lacag -bixinta, xaddiga laga jari karo iyo sannadlaha ah taas oo ah haddii aad rabto caymis dhammaystiran ama qorshe sannadle ah oo keliya.
Iyada oo leh ASPCA Pet Caymis kuma koobna shabakad khabiirro gaar ah, maxaa yeelay shirkadu waxay si toos ah u siisaa xayawaanka mana aha inaad hore u bixiso lacag aad u badan.
Shirkaddu waxay kaloo bixisaa ilaa 30 maalmood si ay u falanqeeyaan siyaasaddaada iyo ikhtiyaarkaaga wax iibsiga, oo haddii aadan ku qanacsanayn waad joojin kartaa lacagtaaduna dib bay kuugu soo celin doontaa.
In kasta oo inta badan shirkadaha caymiska xayawaanku ay inta badan kordhiyaan muddada sugitaanka illaa lix bilood illaa xitaa hal sano xaalad caafimaad oo xoolo gaar ah, ASPCA waxay siisaa 14 maalmood oo sugitaan ah dhammaan xayawaanada caymiska leh. Iyada oo leh ASPCA waxaad ku heli kartaa xadka siyaasad ka hooseeya tan celceliska taasoo la micno ah in lacag -bixinnadu ay sidoo kale hooseeyaan, xadka sannadlaha ahi wuxuu ka bilaabmaa $ 3,000 wuxuuna u socdaa ilaa $ 10,000 bisadaha iyo eyda.
ASPCA waxay leedahay adeeg macmiil oo aad u wanaagsan kaas oo fududeynaya in lagu soo gudbiyo sheegashooyinka khadka tooska ah iyada oo loo marayo xariirka xubinnimada, boostada, ama fakis, sidoo kale waxay leeyihiin barnaamij mobiil oo aad u adeegsan karto inaad ku cusbooneysiiso biilka, beddesho daboolista, ku darto xayawaan rabaayad ah, oo hubiso heerka dalabka ee raaxada gurigaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad go'aansan kartaa in laguu soo celiyo biilashaada xoolaha iyada oo loo marayo deebaaji toos ah ama jeeg boosto.
Markii ay bilowday inay bixiso caymiska caafimaadka kadib heshiiskii wada -shaqayneed ee 2006, ASPCA waxay caymisay in ka badan 40,000 Bisadood iyo Eeyo waxayna ka shaqaysay in ka badan 1.6 milyan oo sheegasho.
Ugu dambayntii, qoraa -hoosaadkeedu waa Shirkadda Caymiska Dabka ee Mareykanka oo maadaama aysan ahayn shirkad caymis kaligeed siyaasadeeda waxaa maamula Crum iyo Forster oo leh A+ (Sare) qiimeynta Xafiiska Better Business (BBB) ​​awoodeeda la kulanka Xitaa shirkadda Caymiska Dabka ee Maraykanka ayaa iyana leh A xasilloonida maaliyadeed ee AM Best tan iyo 2008. Markaa ASPCA Pet Insurance, waxaad ku jirtaa gacmo ammaan ah.
Akhri ALSO: 13 Shirkadaha ugufiican ee bixiya Caymiska Xayawaanka ee 2021
Sidii aan hore u sheegnay hannaanka caymiska ASPCA Pet Insurance waa mid aad u fudud, shirkaddu waxay bixisaa shil la beddeli karo iyo jirro iyo shil-kaliya ikhtiyaarada daboolida eeyaha iyo bisadaha, kuwa xayawaankaagu gaarayo lix toddobaad iyo wixii ka sareeya waa la qori karaa, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho degelkeeda, hesho xigasho bilaash ah adoo siinaya macluumaadka muhiimka ah ee bisadahaaga ama eeyahaaga sida jinsi, qafis, iyo , summada sibka. Si kastaba ha ahaatee, diiwaanada caafimaadka xoolaha ayaa lagaa rabaa waqtiga sheegashada koowaad.
Waxaad sidoo kale hagaajin kartaa xadkaaga xayawaanka, ka -goynta sanadlaha ah, boqolleyda lacag -bixinta, iyo mushaharka ganacsiga u dhigma si aad u aragto sida qorshayaasha kala duwan u saameeyaan lacagtaada. Qorshayaasha fayoobaanta waxaa lagu heli karaa kharash dheeraad ah waxayna leeyihiin nidaamkooda go'aaminta inta ay bixin doonaan iyada oo xaddidan noocyada adeegga gaarka ah sanadkiiba. Dhammaan daaweynta ku habboon ee la xiriirta shilalka iyo jirrada waxaa la daboolaa 14 maalmood oo sugitaan ka dib taas oo macnaheedu yahay in wax kasta oo dhaca 14kaas maalmood gudahood aysan bixin doonin faa'iidooyinka siyaasadda.
ARAG SIDOO KALE: 10 Eeyaha Ugu Cadowga Badan Adduunka 2021
Markay timaaddo shilku wuxuu u qorshaysan yahay oo keliya eeyaha iyo bisadaha, waxay la timaaddaa isla muddada sugitaanka 14 maalmood siyaasaddani waxay daboolaysaa baaritaannada ogaanshaha iyo daaweynta ka dhalata dhaawacyada. Hoos waxaa ah adeegyada ay daboosho caymiska shilka iyo jirada ASPCA:
Daawada laguu qoro
Xaaladaha la iska dhaxlo iyo kuwa lagu dhasho
Daawooyinka dhakhtar qoray iyo cuntada
Intaa waxaa dheer, ASPCA Caymiska Xayawaanka ayaa daboolay sheegashooyinka sida arrimaha caloosha iyo mindhicirka, Kansarka/koritaanka iyo daaweynta, iyo sheegashooyinka la xiriira Dhegaha iyo kuwo kale. Xaalad mar dambe looma tixgelin doono inay hore u jirtay haddii xaaladda xayawaankaaga laga daaweeyey daaweyn iyo astaamo muddo 180 maalmood ah.
Shuruudaha soo socda ayaa laga reebay caymiska: Adeegyada aan caafimaadka xoolaha ahayn, xubin-ku-beddelidda, hababka la isku qurxiyo, raacitaanka, nadiifinta ilkaha, bilicsanaanta, taranka, sahayda qurxinta, Dhaawac ama Xanuun ka dhasha hawlo dayacan, cuntooyin dhakhtar qoray, iyo ilaalin shakhsiyeed, iwm. sidoo kale waa wax yar ka reebitaanka fardaha waxayna yihiin goynta qoob -ka -ciyaarka iyo arthritis.
Caymiska Xayawaanka ASPCA si toos ah uguma xirna ASPCA maadaama Crum iyo Forster ay bixiyaan khidmad boqornimo oo loogu talagalay isticmaalka magaca ASPCA. Markaa waxay hoos u dhigtaa sumcadda ay dhistay astaanta ASPCA oo haddii aysan dhab ahayn sumcaddan caanka ah ma aqbali doonto heshiiska noocaas ah maxaa yeelay sumcaddoodii ayaa iyaduna khatar ku jirta. Xaqiiqda ah in ASPCA ay oggolaato inay dhigto magaca badeecadan Hartilled ayaa wax badan ka tarjumaysa kalsoonida ay ku qabaan shirkadda caymiska xayawaanka. Sidoo kale, iyada oo hoosta ka xarriiqaysa ay tahay Shirkadda Caymiska Dabka ee Mareykanka, waxay ku leedahay qiimeyn AM Best sababta oo ah awoodda ay u leedahay inay la kulanto waajibaadkeeda maaliyadeed.
Intaa waxaa dheer, C&F waxay leedahay A+ (Sare) qiimeyn leh Better Business Bureau (BBB). Ka dib markii wada -shaqayntu ay la yeelatay Kooxda Hartville Pet Insurance Group 2006, ASPCA waxay caymisay in ka badan 40,000 Bisadood iyo Eeyo waxayna ka shaqaysay 1.6 milyan oo sheegasho.
Dhammaan xaqiiqooyinkan, dhererkooda, iyo saamaynta ASPCA Pet Insurance ayaa awooday inay soo jiidato sanado badan, way iska caddahay in ASPCA aysan ahayn khiyaamo. Sidaa darteed, ASPCA waa Shirkadda Caymiska Xoolaha ee Legit sidaas darteed, haddii aad rabto inaad ka iibsato siyaasad xayawaankaaga iyaga xor u ah inaad sidaas samayso, laakiin hubso inaad samayso cilmi -baaristaada habboon ee ku saabsan tartamayaasheeda si aad u hubiso haddii siyaasadeedu adiga kuu fiican tahay .
Qiimaha siyaasad kasta waxay u gaar tahay xayawaankaaga waxayna ku xiran tahay arrimo ay ka mid yihiin taranka, da'da, goobta, xaaladda caafimaad ee xayawaankaaga, iyo qaar kaloo badan. Caymiska Pet ASPCA wuxuu bixiyaa shil la beddeli karo iyo jirro iyo ikhtiyaarrada caymiska shilka-kaliya eeyaha iyo bisadaha, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad geliso macluumaadka xayawaankaaga oo ay la socoto nambarkaaga ZIP-ga koronto-dhaliyaha xigashada internetka, daqiiqad gudaheed waxaad ku dhisi kartaa qorshaha aad doorbiday leh caymiska soo socda:
Kala goyn la’aan: $ 100, $ 250, iyo $ 500
Xadka caymiska sanadlaha ah: $ 3,000, $ 5,000, $ 7,000, $ 10,000, iyo $ 15,000
Bixinta: 70%, 80%, iyo 90%
Si aan kuu siino fikrad guud, waxaan u isticmaalnaa soo-saaraha xigashada internetka ee ASPCA si aan u abuurno siyaasadaha soo socda: Caymiska Shilka iyo Jirrada ee timaha dheer ee guriga, hal sano jir, bisad lab ah oo leh $ 10,000 oo caymis ah, $ 500 laga jari karo, iyo 80% lacag celin ayaa timid ilaa $ 19.71 bishii. Daryeelka Ka Hortagga Aasaasiga ah ee caymisku wuxuu ku daray $ 9.95 bishiiba $ 250 oo caymis ah wadar ahaan $ 29.66 bishii.
Shilka iyo Jirrada nooc isku dhafan, saddex jir ah, cabbir dhexdhexaad ah (25-50 Ibs), eyga dheddig ah oo leh $ 10,000 oo dabool ah, $ 500 laga jari karo, iyo 80% lacag celin ayaa timid $ 37.15 bishiiba. Caynsanaanta Daryeelka Ka -hortagga Aasaasiga ah waxay ku dartay $ 9.95 oo dheeraad ah bil kasta $ 250 oo caymis ah wadar ahaan $ 47.10 bishii.
Caymiska Xayawaanka ASPCA ee bisadaha iyo eeyaha ayaa bixiya qorshe caymis oo dhammaystiran oo ay ku jiraan shil iyo jirro iyo qorshe shil-keliya. Qorshaha caymiska oo dhammaystiran wuxuu daboolayaa qorshayaasha shilka-keliya iyo cudurrada kale ee caadiga ah ee soo bixi kara. Qorshaha shilka kaliya ayaa gebi ahaanba ah dhaawacyada ka dhashay shil.
Waxa kale oo jira laba qorshe oo fardaha ah kuwaas oo ah Colic iyo qorshaha shilka, oo daboolaya xaaladaha caloosha iyo arrimaha la xiriira shilalka. Qorshaha ugu dambeeya waa Colic, shilal, iyo jirro wuxuuna ku daraa daaweynta cudurrada sida kansarka iyo xaaladaha la iska dhaxlo.
Waxaad habayn kartaa qorshaha si aad u doorato sannadlaha laga jari karo, xadka sannadlaha ah, iyo boqolleyda caymiska, taas oo macnaheedu yahay in boqolkiiba sheegashooyinka xaqa u leh uu bixiyo caymiyaha, waxaad kaloo ku dari kartaa xulashooyinka qorshaha daryeelka ka -hortagga qorshayaasha jira. Kuwaani waxay daboolayaan waxyaabaha ay ka mid yihiin dirxiga wadnaha, booqashooyinka fayoobaanta, shilinta iyo dawada boodada, iwm Dhinaca kale ASPCA waxay weli bixisaa laba qorshe daryeel caafimaad oo ikhtiyaari ah oo hubinaya in lagugu magdhabo daryeelka xayawaanka ee ka hortagga ah iyo kan caadiga ah.
Waxaad dooran kartaa inta u dhaxaysa Qorshaha Daryeelka Ka -hortagga Premium $ 24.05 bishii oo leh xaddid sanadle ah oo ah $ 450 iyo Qorshaha Daryeelka Ka -hortagga Aasaasiga ah $ 9.95 bil kasta oo leh xaddiga sannadlaha ah ee $ 250. Qorshayaasha Caymiska Xayawaanka ASPCA ma daboolayaan xaaladihii hore u jiray haddii aan laga bogsan calaamado ka madhan ugu yaraan 180 maalmood laakiin waxay daboolayaan caafimaadka hab dhaqanka iyo daaweyn kale.
Hadda oo aad ogtahay qorshooyinka laga iibsan karo ASPCA Pet Insurance Reviews ilaa hadda, waxaa kale oo muhiim kuu ah inaad ogaato Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka shirkadda.
Bixi ikhtiyaarada daboolida shilka, jirrada, iyo daboolida fayoobaanta iyo sidoo kale qorshaha shilka-kaliya
30 maalmood oo lacag celin ah
Xayawaanka la daboolayo markay kula safraan Maraykanka iyo Kanada
Waxay bixisaa 10% dhimis xayawaan kasta oo dheeraad ah
Sii siyaasadaha eyda, bisadaha, iyo fardaha
Ikhtiyaarka biilinta dabacsan
Caynsanaanta hore u jirtay ee xaaladda kadib 180 maalmood oo aan calaamad lahayn
Lacag -celin yar oo ay soo sheegeen macaamiisha
Xulashada siyaasad xaddidan
Sababo la xiriira COVID-19 sheegashada sheegashada ayaa hadda ka dheer sidii caadiga ahayd
Laguma dari karo qorshaha ilaa inta wareegga 12-ka bilood ee soo socda bilaabmayo
Haddii aad u iibsaneyso Shirkadaha Caymiska Xayawaanka eeyaha iyo bisadaha bixiya ikhtiyaarada daboolidda shilka, jirrada, iyo daboolidda fayoobaanta, markaa ASPCA ayaa laga yaabaa inay kugu habboon tahay.
Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarkeeda siyaasadda biilasha ayaa xaddidan, wakhtiga socodsiinta oo gaabis ah iyo lacag -celin yar ayaa macaamiisha ay soo sheegeen sidaa darteed hubi inaad samayso dadaalkaaga habboon adiga oo baaraya kuwa la tartamaya ka hor intaadan go'aannada caymiskaaga u samaynin xayawaankaaga, iyada oo leh ASPCA Dib -u -eegista Caymiska Xoolaha waxaan kaa rajaynaynaa Waxaan u samayn doonaa go'aanno caymis oo ka fiican xayawaankaaga iyo fardahaaga.
Investopedia.com - Dib -u -eegista Caymiska Xayawaanka ASPCA
pawlicy.com - Macluumaadka & Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee ASPCA: Wax kasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Faallooyinka Caymiska Caafimaadka Xoolaha ee Caafimaadka 2021
13 Shirkadaha ugufiican ee bixiya Caymiska Xayawaanka ee 2021
Shirkadaha Caymiska Xayawaanka ee ugu Fiican Kanada | Cusboonaysiinta 2021
Mushahar Ma Lagu Siiyaa Eeyaha Koriya? 10ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Lacag Looga Sameeyo Eeyaha Sanadka 2021
10 Eeyaha Ugu Cadowga Badan Adduunka 2021
Faallooyinka Caymiska ee xiga 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Sida Loo Iibsado Saamiga XRP 2022: Tillaabo-Tallaabo Hagaha
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay XRP?Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Soo Iibsato saamiyada XRP?Sida loo iibsado kaydka XRP…
15ka Maamule ee ugu mushaarka badan ee aan faa'iido doonka ahayn 2022
Tusmada Tusmada Maxay Qabaan Maamulayaasha Aan macaash doonka ahayn? Maxay yihiin Ururada aan faa'iido doonka ahayn? Sideed lacag u samaysaa haddii aad leedahay…
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Cilmi-nafsiga Caafimaadka? Muxuu Sameeyaa Cilmi-nafsiga Kiliinikada
Tusmada Tusmada Qari Maxaynu Ugu baahanahay Tababarayaal
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Ganacsiga Guryaha Ma-guurtada ah?Sidee u Shaqeeyaa Warshadaha Guryaha Ma-guurtada ah?Maxay tahay…
Tusmada Tusmada Qari Waa maxay Maaliyadda Shakhsiyeed? Waa maxay Muhiimadda Maaliyad Shakhsiyeed? Mabaadi'da Maaliyadda Shakhsi ahaaneed